Eyewash Station, Life palitao, famonoana afo Suit - Anhang
Natambatra Eyewash Station
Mijidina Eyewash Station
Wall-tsoavaly Eyewash Station
Sombin-javatra Life Mipalitao
Inflatable Life Mipalitao
Thow-Over Inflatable Fiainana Raft
Thow-Over Self-manitsy ny Fiainana Inflatable Raft
Large Thow-Mihoatra ny Self-manitsy ny Fiainana Inflatable Raft
Davit-Nalefa Inflatable Fiainana Raft
Open azo ahitsy Inflatable Fiainana Raft
Nampiasaina Yacht Inflatable Fiainana Raft
Fiainana Raft Light
Fiainana Search Light
Basket Type filanjana
Hazondamosina vilia filanjana
Aluminum firaka Ambulance filanjana
Aluminum firaka Stair filanjana
Leg vahana Splint
Feno fifaliana Fiainana-dalana fahavaratra
famonoana afo Suit
Fire Fisakanana ilay Suit
Fire Dikanteny Suit
mpamono afo Kit
Self-Rescue sivana Respirator
Emergency Escape fifohana rivotra Device (EEBD)
Self-Ao fifohana rivotra fitaovana (SCBA)
Herinaratra Long Tube Respirator
Mitsingevana Long Tube Respirator
famonoana afo Hose
famonoana afo Nozzle
famonoana afo anankiray efa voavitrana
Famonoana afo Hose Reel
antsasany Face Gas Mask
Fonosina tanteraka Chemical Protective Suit
Manasa fonosina Chemical Protective Suit
famonoana afo Pump
Portable Type sombin-javatra Applicators
Pidinana Control Device
Fire Retardant tady
Fire Rescue Jump lafika
Fonosina tanteraka Diving Suit
Diving Air Varingarin'i
Diving fonon-tanana, Hat sy ny ba kiraro
Diving Ding Hazokely
antsasany Face Mitsoraka Mask
Full Face Mitsoraka Mask
Diving Mask andilany
Diving fanandratako Bag
Marina mahavoky Water Separator
Filter Fa Marina mahavoky Water Separator
Marina maloto Treatment Plant
Marina Communication Ary Navigation Device
Marina Automatic Famantarana System (ais)
Marina Global toerany System (GPS)
Marina Search sy Rescue Radar Transponder (SART)
Marina Electronic Tabilao System (ECS)
Marina ais Netsonde (ais hanohana)
Avo Medium Frequency Station (MF / HF)
Marina Fish Finder
Aseho eto Emergency Position Radio Fanilo (EPIRB)
Personal Anao Ireto: Fanilo (PLB)
Hatrany hametraka ny hatsaran'ny toerana tamin'ny voalohany, ary hentitra hanara-maso ny kalitaon'ny vokatry ny dingana rehetra.
Ny Factory dia nitombo lasa ny Premier ISO 9001: 2015 Certified mpanamboatra ny avo lenta, Cost-mandaitra vokatra.
Professional mpanamboatra ny mihoatra ny 2000 karazana vokatra. Ny orinasa (Jiangsu Anhang Marina Equipment Co., Ltd.) dia hita ao amin'ny Dongtai, faritanin'i Jiangsu, Sina.
24/7 ONLINE Filaharana
Fa mety kokoa ho anao ny mba amin'ny alina, na eny an-dalana ianao be atao. Tsy misy intsony miandry hihaino momba ny nitarika fotoana na indray-baiko -Jereo ny inona no mora azo sy ny filaminana izay tianao N0W.
Tsindrio & Wait
Santionany azo hatolotra eo na aiza na aiza eto amin'izao tontolo izao ao anatin'ny 7 andro raharaham-barotra. Fa ampahany baiko, ny orinasa nandefa haingana ho voafidy. Ny hany zavatra ilainao atao dia ny tsindrio ary miandry.
Rehefa voamarina PayPal mpivarotra, dia manolotra anareo ny 100% soa aman-tsara sy ny mety tserasera fiantsenana. Manaiky T / T, L / C, PayPal, Western Union sy ny carte de crédit toy ny fandoavam-bola teny.
Self-miaina ao fitaovana (SCBA)
Plastika Portable Eyewash Station
Hitety ny sasany ny vokatra malaza indrindra tolotra.
Manana mpiara-miasa tsara maro manerana izao tontolo izao
Jiangsu Anhang Marina Equipment Co., Ltd. izay miova sy upgraded avy Dongtai City Anhang Marina Fitaovana Factory. No voasoratra anarana renivohitry ny orinasa dia 10,88 tapitrisa RMB, ary ny orinasa dia voafetra karazana andraikitra orinasa. Ny orinasa mampifandray ny lafiny fikarohana siantifika, ny famokarana, ny varotra sy ny fampidirana, ary ny vokatra dia foana namidy tamin'ny tsena ivelany.
Water mamonjy aina mitsingevana Rescue hanohana, Fiainana Raft Light, Fiainana Search Light, Radar Detector , Solas Lifebuoy , Radar Sensor,